04/10/2018 - Page 3 sur 4 -
Mananjary : Lehilahy iray niharan’ny fitsaram-bahoaka
Manoloana ilay hain-trano goavana niseho tao amin’ny fokontany Masindrano sy Ankadirano, kaomina Mananjary ny alin’ ny alahady lasa teo. Lehilahy iray no fantatra fa niharan’ny fitsaram-bahoaka sy niteraka savorovoro tany an-toerana taorian’io. Fokontany roa no …Tohiny
Raharaha famonoana telo mianaka : Nangataka hitsabo tena ireo voafonja
Roalahy amin’ireo telo voafonja voarohirohy, ho nandray anjara tamin’ilay vonoan’olona nampivarahontsana teny Imerintsiatosika, no milaza fa marary. Eny tsiafahy no migadra vonjimaika amin’izao fotoana ireto nahavita namono nahafaty ireo telo mianaka teny Imerintsiatosika iny, ary …Tohiny
Aretina : Tsy mitovy ny Pesta sy ny tiberkilaozy
Niteraka resa-be teto an-drenivohitra, tamin’ny herinandro lasa iny ny fahenoana, fa misy olona iray nahiana ho voan’ny aretina pesta. Rehefa natao anefa ny fitiliana rehetra dia voamarina fa aretina tiberkilaozy no nahazo ilay olona fa …Tohiny
« Kay Fôsika »
Maro tamin’ireo mpamily fiara teto Madagasikara no voatery namono andro maromaro mihitsy, nilahatra teny amin’ireo toerana natokana hanoloana ny fahazoan-dalana, ahafahana mitondra fiara ho Biometrika. Nisy tokoa mantsy ny fanentanana niaro fanerena tamin’izany, fa tsy …Tohiny